ARIMAHA BULSHADA Archives - Raaso News Network ( RNN )
Home » ARIMAHA BULSHADA
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Koonfur Galbeed, ayaa kulan degdeg ahaa iusgu yeeray la-taliyayaashiisa dhinaca amniga iyo xubno isaga ku dhow. Kulanka oo ka dhacay Madaxtooyada Koonfur Galbeed, ayaa looga wada xaajooday amniga Baydhabo iyo Ciidmaada faraha badan ee magaalka ku soo qul qulayay maalmihii u danbeeyay, Kuwaasoo qaarkood ay wataan Dadka kursiga kula loolamaya. Shariif Xasan Sheekh ...
Is-beddelka siyaasadeed ee Itoobiya ka dhacay waxa uu noqday mid sare u qaaday dhawrista xuquuqul insaanka, ayada oo tacaddiyadii badnaa ee maamulkii ka talin jiray magaalada ee Cabdi Iley lasoo afjaray. Jigjiga oo ka mid ahayd magaalooyinka ugu horreeya marka ay timaado ku tumashada xuquuqul Insaanka ayaa noqotay mid ka mida kuwa ka faa’ideystay hoggaanka is bedelay ee Itoobiya iyo ...
WAR XASAASI AH :- 340 Lambarka Muujiyey Guusha Dowlada Farmaajo iyo Waxay Kaga Duwan Tahay Dowladihii Ka Horeeyey Oo Banaan La Soo Dhigay…!!!!
Kaddib markii shakay lagu dhawaaqay miisaaniyadda dowladda federal-ka ee 2019, waxaa muuqday is bedel weyn iyo guulo la taaban karo oo laga gaaray sare u qaadista dhaqaalaha dalka iyo dakhliga dowladda ay soo xareyso. Lamabrka 340, oo iha inta milyan ee miisaaniyadda 2019 ay tahay ayaa ah astaan muujineysa guulaha dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku tallaabsatay intii ay dalka ...
WARBIXIN XIISO LEH :- Dowlada Somalia Ma Ku Ceebaysan Tahay in Baraha Bulshada ay ka Shidaal Qaadato, Amaradana Ka Bixiso Ama Afhayeen u ah…!!!!
In badan waxay kooxaha mucaaradka ku ah dowladda hadda jirta iyo madaxda maamul goboleeyadu dowladda ku eedeeyeen inay xoogga saartay baraha bulshada. Taageerayaasha badan ee dowladdu ku leedahay baraha bulshada ayaa lagu tilmaamay kuwo lagu bixiyay lacag badan. Waxaa eedaha lagu daray in shacabki Soomaaliyeedba ay kasoo qaadday inta ooga sacab tunto Faysbuugga. Haddaba eeddaasu ma saxbaa dowladduse ma ku ...
Saadaasha Wanaagsan Ee Horumarka Siyaasadda Arrimaha Dibada Dalka Somalia Waa Ay Kobacday Ayaa La Yiri Kadib Shirkii Muqdisho ee Carabta…!!!!
Kulanka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Iskaashiga Islaamka oo 27-Okt-2018 ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu kadhigan yahay tallaabo fiican oo ay qaadday siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxaana suuragal ah in dhaqaaqa siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 5tii sano ee ugu dambeysay ay sabab u ahaayeen dadaaladii is xigxigay ee ay wasaaradda arrimaha dibaddu kuhirgelisay xiriirka wax wadaqabsiga ...
XOGTA :- Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Ku Aadan Olalaha Doorashada Ee K/Galbeed iyo Shariif Sakiin Oo Dareemaya Culeeska Dhanka Dowlada Somalia…!!!!
Loolanka Murashaxiinta Madaxtinimada Koonfur-Galbeed ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey, waxaana dadka reer Baydhabo ay si weyn u hadal hayaan sida xaal noqon karo maalmaha yare e haray. Hadal heynta ugu badan ayaa sidoo kale ah in qaar ka mid ah musharaxiinta, gaar ahaan kuwa taageerada ka haysta dowladda federaalka ay haystaan dhaqaale xooggan oo ay ku qal-qal gelin karaan ...
WAR CUSUB :- Maxaa ka jira in Boqortooyada Sacuudiga ay Ey Rw Kheyre Ku Qanciyeen in Uu Aqbalo Heshiiska Shirkada DP World Ee Dekeda Berbera….!!!!
Dawladda Sucuudiga, ayaa la sheegay inay ku qancisay dawladda Soomaaliya inay joojiso dagaalka mucaaradeed ee ay kaga soo horjeedo mashruuca horumarinta iyo casriyaynta dekedda Berbera ee DP world. Wargeyska The Indian Ocean, ayaa cadadkiisii jimcaha qoray in Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre oo safar ku tagay dalka Sucuudiga maalmihii la dhagax dhigayay balaadhinta dekedda Berbera, uu boqorka dalka Sucuudiga ...
Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saakay Suuqa Bakaaraha waxa ay ku qabteen burcad hubeesan oo dad shacab ah dhac u geesanayay, waxaana talaabadan si weyn usoo dhaweeyay ganacsatada Suuqa. Goobjoogayaal ayaa ku waramay in ciidamada la kulmeen burcad Mooto bajaaj wadatay oo dhac ka geesaneysay qeybo kamid ah Suuqa, waxa ayna ciidamada burcadaasi ku fureen rasaas sababtay in mid kamid ah ...